Wararka Maanta: Talaado, July 10, 2018-Brett Kavanaugh oo loo magacaabay xaakimka maxkamada sare ee dalka Mareykanka
Kavanaugh, ayaa ah 53-jir aad ugu janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsanyahay madaxweynaha.
Wuxuu 12-ki sano ee lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah. Gaar ahaan maxkamadda racfaanka ee magaaladan Washington DC.
Sidoo kale wuxuu la-taliye u soo noqday madaxweynihi hore ee Mareykanka Goerge Bush. Si uu noqdo mid ka mid ah garsoorayaasha Maxkamdda Sare, wuxuu u baahnaan doonaa in ay ansixiyaan Golaha Senetka Mareykanka.
Isha Warkan VOA